ခမျြးသာသူတဈယောကျဖွဈဖို့ဆိုရငျ ဆန်ဒကိုဘဝနဲ့ ထိနျးနိုငျရမယျ - Celegroup
HomeKnowledgeခမျြးသာသူတဈယောကျဖွဈဖို့ဆိုရငျ ဆန်ဒကိုဘဝနဲ့ ထိနျးနိုငျရမယျ
တဈခါကသားအဖနှဈယောကျ အလှနျစညျကားသော စြေးကွီးတဈစြေးအတှငျးသို့ ရောကျရှိလာသောအခါအသကျ၁၀နှဈခနျ့ရှိသားငယျမှ
သား…တဈကောငျဘယျလောကျလဲ သှားမေးလိုကျလို့အဖကေပွောလိုကျပါတယျ အဲ့ဒါနဲ့သားဖွဈသူလညျး ယုနျကငျသညျကိုသှားမေးတော့ ယုနျတဈကောငျငါးကပျြလို့စြေးသညျကပွနျပွောပါတယျ
သားဖွဈသူလညျး အဖတေဈကောငျငါးကပျြတဲ့ဗြ သားကိုဝယျကြှေးနျောဆိုတော့ အဖကေသူ၏လကျထဲကဈြကဈြပါအောငျ ဆုပျကိုငျထားတဲ့ တဈဆယျတနျလေးတဈရှကျကိုကွညျ့ရငျး အံကိုကွိတျပွီး
လာသှားရအောငျ သား… ဗိုကျဆာနရေငျ အဖတေခွားဟာ ဝယျကြှေးပါ့မယျလို့ပွောပွီး သားဖွဈသူရဲ့လကျကိုဆှဲပွီး အဲ့ဒီနရောကနေ ထှကျလာခဲ့တယျ
ပွီးတော့မှ ဘိနျးမုနျ့၂ခုတဈကပျြဖိုး သားဖွဈသူဗိုကျပွညျ့စဖေို့ ဝယျကြှေးခဲ့ပါတယျ
ဒီလိုနဲ့နောငျ၁၅နှဈလောကျကွာတဲ့အခါအဲဒီစြေးကွီးထဲကိုပဲ သားအဖနှဈယောကျပွနျရောကျလာတဲ့အခါသားဖွဈသူက ပူဆာပွနျပါတယျ
အဖေ ဟိုမှာယုနျကငျသညျရှိသေးတယျဗြ။သားကို ယုနျကငျတဈကောငျလောကျဝယျကြှေးပါဆိုတော့
အဖကေသားတဈကောငျဘယျလောကျလဲ ?သှားမေးခညျြဆိုတော့လှနျခဲ့တဲ့ ၁၅နှဈလောကျက တဈကောငျငါးကပျြသာရှိတဲ့ယုနျကငျဟာ အခု တဈကောငျငါးဆယျဖွဈနပေါပွီ
ဟာ… အဖစြေေးကွီးလိုကျတာ တဈကောငျငါးဆယျတဲ့ဗြ
အခုအခြိနျမှာငါ့သားစားခငျြရငျတဈကောငျမဟုတျဘူး နှဈကောငျစားလို့ အဖကေပွောတဲ့အခါသားဖွဈသူက အံ့သွတဲ့မကျြနှာနဲ့
ဟငျ! ဟိုတခါ သားစားခငျြတယျဆိုတော့ အဖေ သားကိုဝယျမကြှေးပဲ အခုကွ နှဈကောငျတောငျဝယျကြှေးနပေါ့လားအဖရေ… ဆိုတော့
ဒီမှာသား ဟိုတခါ အဖဝေယျမကြှေးခဲ့တာ အဲဒီတုနျးက သားအဖနှဈယောကျဆငျးဆငျးရဲရဲနဲ့ဘဝကိုဖွတျသနျးနတေဲ့အခြိနျမှာ အဖလေ့ကျထဲ တဈဆယျတနျလေးတဈရှကျပဲရှိတယျငါ့သားအဲဒီအခြိနျတုနျးက ယုနျတဈကောငျငါးကပျြအဖဝေယျကြှေးရငျရနိုငျပမေဲ့
အဖလေ့ကျထဲမှာ ကနျြခဲ့မဲ့ငါးကပျြတနျတဈရှကျက အဖတေို့သားအဖနှဈယောကျ မနကျဖွနျအတှကျ တကယျလိုအပျမဲ့ ဆနျ၊ ဆီ၊ ဆား စတာတှကေို ဝယျဖို့ မလုံလောကျဘူးသား
အဲ့ဒါကွောငျ့ သားကိုဝယျကြှေးခငျြတဲ့ဆန်ဒကိုခြိုးနှိမျပွီး ဘိနျးမုနျ့၂ခု တဈကပျြဖိုးသာ အဖဝေယျကြှေးခဲ့တာပါအခုအဖတေို့က အရငျတုနျးကလိုမဟုတျတော့ဘူးလအေခုအဖတေို့ခမျြးသာနပွေီငါ့သားစားခငျြတာ လုပျခငျြတာမှနျသမြှကိုအခုအခြိနျမှာ အဖအေကုနျလုပျပေးနိုငျတယျငါ့သားတဲ့
ကြှနျတျောတို့တဈတှလေညျး ဘဝကို ကိုယျ့အားကိုယျကိုးဖွတျသနျးနကွေတဲ့အခြိနျမှာ လိုခငျြတာ.လုပျခငျြတာ.ဝတျခငျြတာ.စားခငျြတာမှနျသမြှကို ပုံပွငျထဲက အဖဖွေဈသူလို ဆန်ဒကို ခြိုးနှိမျထားရပါမယျ
ကိုယျ့ဘဝရပျတညျဖို့ ခကျခဲနတေဲ့အခြိနျမှာပိုကျဆံရှိခမျြးသာနတေဲ့သူတှနေဲ့ လိုကျပွီးတနျးမညှိသငျ့ပါဘူး
အခုလကျရှိ ပိုကျဆံခမျြးသာတဲ့သူတဈယောကျဟာထမငျးတဈပှဲ ၁၀,၀၀၀ပေးပွီးစားနိုငျပါတယျအင်ျကြီတဈထညျ ၅၀,၀၀၀ပေးပွီးဝတျနိုငျပါတယျ
အဲ့ဒီလိုပဲ ကြှနျတျောတို့ခငျဗြားတို့တဈတှဟောအမွဲတမျးမဟုတျပမေဲ့ အခါအားလြှျောစှာသူဌေးတှလေို ထမငျးတဈပှဲ ၁၀,၀၀၀ပေးပွီးစားနိုငျသလိုအင်ျကြီတဈထညျ ၅၀,၀၀၀ပေးပွီး လိုကျဝတျနိုငျပါတယျ..
ဒါပမေဲ့ တနျဘိုးခငျြးတူပမေဲ့ပေးဆပျရပုံခငျြး မတူပါဘူး …
ပိုကျဆံခမျြးသာတဲ့သူဌေးတဈယောကျရဲ့လုပျအားနဲ့ရတဲ့ငှတေဈသိနျးဟာ မိနဈပိုငျးလေးနဲ့ဖွဈနိုငျပမေဲ့ကြှနျတျောတို့တှရေဲ့လုပျအားနဲ့ရတဲ့ငှတေဈသိနျးကတော့ မိနဈပိုငျးလေးနဲ့မဖွဈနိုငျလို့ပါပဲ
ယုနျတဈကောငျငါးကပျြ မစားနဲ့ငါးဆယျဖွဈမှစား.. လို့ပွောလိုကျပါရစေ
ချမ်းသာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ဆန္ဒကိုဘဝနဲ့ ထိန်းနိုင်ရမယ်
တစ်ခါကသားအဖနှစ်ယောက် အလွန်စည်ကားသော ဈေးကြီးတစ်ဈေးအတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာသောအခါအသက်၁၀နှစ်ခန့်ရှိသားငယ်မှ
အဖေကပြောလိုက်ပါတယ် အဲ့ဒါနဲ့သားဖြစ်သူလည်း ယုန်ကင်သည်ကိုသွားမေးတော့ ယုန်တစ်ကောင်ငါးကျပ်လို့ဈေးသည်ကပြန်ပြောပါတယ်
သားဖြစ်သူလည်း အဖေတစ်ကောင်ငါးကျပ်တဲ့ဗျ သားကိုဝယ်ကျွေးနော်ဆိုတော့ အဖေကသူ၏လက်ထဲကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ တစ်ဆယ်တန်လေးတစ်ရွက်ကိုကြည့်ရင်း အံကိုကြိတ်ပြီး
လာသွားရအောင် သား ဗိုက်ဆာနေရင် အဖေတခြားဟာ ဝယ်ကျွေးပါ့မယ်လို့ပြောပြီး သားဖြစ်သူရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီး အဲ့ဒီနေရာကနေ ထွက်လာခဲ့တယ်
ပြီးတော့မှ ဘိန်းမုန့်၂ခုတစ်ကျပ်ဖိုး သားဖြစ်သူဗိုက်ပြည့်စေဖို့ ဝယ်ကျွေးခဲ့ပါတယ်
ဒီလိုနဲ့နောင်၁၅နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါအဲဒီဈေးကြီးထဲကိုပဲ သားအဖနှစ်ယောက်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါသားဖြစ်သူက ပူဆာပြန်ပါတယ်
အဖေ ဟိုမှာယုန်ကင်သည်ရှိသေးတယ်ဗျ။သားကို ယုန်ကင်တစ်ကောင်လောက်ဝယ်ကျွေးပါဆိုတော့
အဖေကသားတစ်ကောင်ဘယ်လောက်လဲ ?သွားမေးချည်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ်လောက်က တစ်ကောင်ငါးကျပ်သာရှိတဲ့ယုန်ကင်ဟာ အခု တစ်ကောင်ငါးဆယ်ဖြစ်နေပါပြီ
ဟာ အဖေဈေးကြီးလိုက်တာ တစ်ကောင်ငါးဆယ်တဲ့ဗျ
ဒီမှာသား ငါးဆယ်မကလို့ငါးထောင်ဖြစ်နေပါစေအခုအချိန်မှာငါ့သားစားချင်ရင်တစ်ကောင်မဟုတ်ဘူး နှစ်ကောင်စားလို့ အဖေကပြောတဲ့အခါသားဖြစ်သူက အံ့သြတဲ့မျက်နှာနဲ့
ဟင်! ဟိုတခါ သားစားချင်တယ်ဆိုတော့ အဖေ သားကိုဝယ်မကျွေးပဲ အခုကြ နှစ်ကောင်တောင်ဝယ်ကျွေးနေပါ့လားအဖေရ ဆိုတော့
ဒီမှာသား ဟိုတခါ အဖေဝယ်မကျွေးခဲ့တာ အဲဒီတုန်းက သားအဖနှစ်ယောက်ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်မှာ အဖေ့လက်ထဲ တစ်ဆယ်တန်လေးတစ်ရွက်ပဲရှိတယ်ငါ့သားအဲဒီအချိန်တုန်းက ယုန်တစ်ကောင်ငါးကျပ်အဖေဝယ်ကျွေးရင်ရနိုင်ပေမဲ့
အဖေ့လက်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့မဲ့ငါးကျပ်တန်တစ်ရွက်က အဖေတို့သားအဖနှစ်ယောက် မနက်ဖြန်အတွက် တကယ်လိုအပ်မဲ့ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား စတာတွေကို ဝယ်ဖို့ မလုံလောက်ဘူးသား
အဲ့ဒါကြောင့် သားကိုဝယ်ကျွေးချင်တဲ့ဆန္ဒကိုချိုးနှိမ်ပြီး ဘိန်းမုန့်၂ခု တစ်ကျပ်ဖိုးသာ အဖေဝယ်ကျွေးခဲ့တာပါအခုအဖေတို့က အရင်တုန်းကလိုမဟုတ်တော့ဘူးလေအခုအဖေတို့ချမ်းသာနေပြီငါ့သားစားချင်တာ လုပ်ချင်တာမှန်သမျှကိုအခုအချိန်မှာ အဖေအကုန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ငါ့သားတဲ့
ကျွန်တော်တို့တစ်တွေလည်း ဘဝကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဖြတ်သန်းနေကြတဲ့အချိန်မှာ လိုချင်တာ.လုပ်ချင်တာ.ဝတ်ချင်တာ.စားချင်တာမှန်သမျှကို ပုံပြင်ထဲက အဖေဖြစ်သူလို ဆန္ဒကို ချိုးနှိမ်ထားရပါမယ်
ကိုယ့်ဘဝရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာပိုက်ဆံရှိချမ်းသာနေတဲ့သူတွေနဲ့ လိုက်ပြီးတန်းမညှိသင့်ပါဘူး.
အခုလက်ရှိ ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့သူတစ်ယောက်ဟာထမင်းတစ်ပွဲ ၁၀,၀၀၀ပေးပြီးစားနိုင်ပါတယ်အင်္ကျီတစ်ထည် ၅၀,၀၀၀ပေးပြီးဝတ်နိုင်ပါတယ်
အဲ့ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့တစ်တွေဟာအမြဲတမ်းမဟုတ်ပေမဲ့ အခါအားလျှော်စွာသူဌေးတွေလို ထမင်းတစ်ပွဲ ၁၀,၀၀၀ပေးပြီးစားနိုင်သလိုအင်္ကျီတစ်ထည် ၅၀,၀၀၀ပေးပြီး လိုက်ဝတ်နိုင်ပါတယ်..
ဒါပေမဲ့ တန်ဘိုးချင်းတူပေမဲ့ပေးဆပ်ရပုံချင်း မတူပါဘူး
ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့သူဌေးတစ်ယောက်ရဲ့လုပ်အားနဲ့ရတဲ့ငွေတစ်သိန်းဟာ မိနစ်ပိုင်းလေးနဲ့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့လုပ်အားနဲ့ရတဲ့ငွေတစ်သိန်းကတော့ မိနစ်ပိုင်းလေးနဲ့မဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲ
ယုန်တစ်ကောင်ငါးကျပ် မစားနဲ့ငါးဆယ်ဖြစ်မှစား.. လို့ပြောလိုက်ပါရစေ